१३ मंसिर २०७७, शनिबार २०:०९
मकवानपुर, १३ मंसिर । विश्व प्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ का उत्कृष्ट ६ प्रतियोगीहरुले शुक्रबार दमदार प्रस्तुति दिएका छन् । उनीहरुले शुक्रबार निर्णायकबाट पाएको अंक, शनिबारको प्रस्तुतिबाट निर्णायकबाट पाउने अंक र दर्शकभोटका आधारमा शनिबार उत्कृष्ट ५ जोडीहरु छानिनेछन् । उनीहरुमध्ये कसले बाजी मार्लान् त ? आउनुहोस् यस बारेमा चर्चा गरौँ । शुक्रबारको प्रस्तुतिमा सर्वाधिक अंक पाएका देवार्थ जोडी सम्भवत उत्कृष्ट ५ मा पुग्नसक्ने अवस्था देखिन्छ । शुक्रबार प्राप्त अंकका आधारमा उनीहरु पहिलो नम्बरमा छन् । त्यस्तै बुद्धिका जोडी खतराको घेरामा छन् । यद्यपि उनीहरुको नतिजा शनिबारको अंक र दर्शकभोटमा आधारित रहनेछ । तपाईको विचारमा कसले बाजी मार्ने सम्भावना छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो फिचर–
प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरुको जोडीहरुमध्ये सर्वाधिक केमेष्ट्रि मिलेको जोडी बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको जोडीले शुक्रबार २४ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले दशौँ हप्ताको पहिलो दिन सकिँदा जम्मा २९१ अंक प्राप्त गरेका छन् । स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले परिचित उनीहरुले शुक्रबार ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले नवौँ हप्ताको पहिलो दिन पहिलो पटक पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । उनीहरुले दुई पटक बटम लाईनको सामना गरेका छन् । डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पहिलो वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री कलाकार प्रियना आचार्य र कोरियोग्राफर शुभम भुजेलको जोडीले शुक्रबार २७ अंक प्राप्त गरेका थिए । स्टेजमा प्रियम जोडीका नामले परिचित उनीहरुले नवौँ हप्ता सकिँदा जम्मा १७१ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार ट्वेर्किङ प्लस कलिहप डान्स गरेका थिए । उनीहरुले एक पटक बटम थ्रीको सामना गरेका छन् ।
त्यस्तै फुलन्देकी आमाका नामले चर्चामा आएका हाँस्य कलाकार उमेश राई र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको जोडीले शुक्रबार २५ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले दशाँै हप्ताको पहिलो दिन सकिँदासम्म जम्मा २८७ अंक प्राप्त गरेका छन् । स्टेजमा आमोद जोडीका नामले परिचित उनीहरुले शुक्रबार पनि ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । यो जोडीले तेस्रो हप्ता पर्फाेमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । उनीहरुको जोडीले दुई पटक बटम लाईनको सामना गरिसकेको छ । नायिका सुमी मोक्तान र कोरियोग्राफर बिजु पार्कीको जोडीले शुक्रबार २९ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले नवौँ हप्ता सकिँदा जम्मा २९८ अंक प्राप्त गरेका छन् । स्टेजमा सुबिजु नामले परिचित यो जोडीले शुक्रबार एरियल एक्रोब्याट्स एण्ड कन्टेम्प्ररी डान्स गरेका थिए । उनीहरुले दोस्रो हप्ता पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । यो जोडीले एक पटक बटम थ्रीको सामना गरिसकेको छ ।
त्यस्तै डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका चर्चित जोडी गायिका ज्योति मगर र कोरियोग्राफर लाउरे सिंहको जोडीले शुक्रबार २७ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले दशाँै हप्ताको पहिलो दिन सकिदा जम्मा २८८ अंक प्राप्त गरेका छन् । ज्योतिला जोडीले शुक्रबार सेन्सुअल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले छैटौँ हप्तामा पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । उनीहरुले आठौँ हप्ता र नवौँ हप्तामा गरी उनीहरुले २ पटक बटम लाईनको सामना गरेका छन् । डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका सबैभन्दा कान्छो जोडी दिभान्सी बैदवार र सिद्धार्थ श्रेष्ठको जोडीले शुक्रबार ३० अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले दशौँ हप्ताको शुक्रबार सकिँदा जम्मा २९१ अंक प्राप्त गरेका छन् । स्टेजमा देवार्थ जोडीका नामले परिचित उनीहरुले शुक्रबार ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले चौथो हप्ता र सातौँ हप्तामा गरी २ पटक पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड र दशौँ हप्ता पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड पनि जितेका छन् । उनीहरुले २ पटक बटम लाईनको सामना गरेका छन् ।